Diinta - Jowhar.com-Somali News Leader
Category Archives: Diinta Muxaadaro : Walaaltinimada Islaamka iyo Sh.Maxamuud Barre Ciid Muxaadaradaan ayaa waxay ahayd mid aad muhiim u ah waxayna ka dhacday masjidka abuu hurarayra ee magaalad gaalkacyo , waxaan kasoo qayb galay dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimada odayaasha dhalinyarada iyo haweenka, waxaana soo jeedinayay Sh.Maxamuud Barre Ciid (Sahal). ...
Islaamka iyo Qabyaalada Sh.Muxamed Macalin Axmed Gaalkacyo: Iyadoo Mushkilada Soomaaliya ka taagan ay sal u tahay is riixriixa Qabaailka ayaa Muxaadaro ku saabsan Qabyaalada iyo Islaamka waxa uu ka qaba Waxaa Sh.Muxamed Macalin Axmed uu ku qabtay Masjidka Ramadaan ee Magaalada Gaalkacyo Xaafada Garsoor. ...
Muxaadaro Dacwada Masuuliyadeeda yaa leh Sh.C/xakiim Muxamed Xirsi.‏ Maxadardani oo kadhcday Masaajidka Nuurul-yaqiin ee Xafada Israac Magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa uu Shiikhu ku faahfaahiyay musuuliyadda Dacwada. ...
Muxaadaro Xisaabi Naftaada intaan lagu Xisaabin Cumar C/xamiid Rashiid.‏ Muxaadaradaani oo loo qabtay Gabadhaha Magaalada Gaalkacyo gaar ahaan kuwa ku taxan Muxaadaraad Taxane ah oo lagu qabto Galab walba oo Jimce ah Masjidka Al-Furqaan ee Xaafada Israac4 (Siinaay) Magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ay ku saabsanayd sidii Qofku uu ula xisaabtami lahaa Naftiisa inta aan Maalinta Aakhiro Alle Xisaabin. ...
Maxaadaro kusaabsan Danbiyada Waawayn oo lagu qabtay Gaalkacyo.‏ Muxaadaradaani oo lagu qabtay Masjidka Ramadaaan ee Xaafada Garsoor ayaa loo qabtay Bulshada qaybaheeeda kala duwan waxaana ay Masaajidka kabilabatay Salaadii Makhrib kadib.
Axkaamta Udxiyada iyo Aadaabta Ciida (Muxaadaro)‏ 8.12.1435 , 02.10.2014 (Gaalkacyo) Iyadoo Maalinta Sabtida ee nagusoo aadan ay Ciidi doonaan Dhamaan Muslimiinta joogta daafaha Caalamka ayaa Muxaadaradaani ku saabsan Axkaamta Udxiyada iyo Aadaabta Ciida waxaa lagu qabtay Masaajidka Ramadaan ee Magaalada Gaalkacyo. ...
Muxaadaro kusaabsan Fadliga Maalinta Arafo oo lagu qabtay Magaalada Gaalkacyo. Muxaadaradaani ku saabsanayd Fadliga iyo Dheeraadka ay leedahay Maalinta Arafo ee 9ka bisha Dul xija ayaa waxaa soo jeedinayay Sh.C/caziiz Axmed Aadam oo kamida Culimada ugu Waawayn Magaalada Gaalkacyo ahna Maamulaha Dugsiga Hoose Dhexe ee Ibnu Cabaas (Gaalkacyo) , waxaana ay ka dhacday Masaajidka Wayn ee Ramadaan. ...
Midkeenii hordhinta kan kale ha ku tukado Sheekh C/laahi Cumar Nuur oo ka mid ah culumadii gundhigga u ahayd saxwada islaamiga ee casriga ah ayaa rag ducaad ah usoo jeediyey inay diinta ka ilaaliyaan dadka soo dhexgalinaya afkaaraha qalloocan oo magaca diinta huwan.
Federaalka Diinta Islaamku ma ogola Dhoohaney Soomaaliyeey maxa idinka si ah oo aad u arki la’dihiin wax ka socda gondihiinna. Markii uu gumaysiga shisheeye ku soo duulay Africa ee uu qabsaday waxay kala kulmeen dad cawaan ah oo aan wax diin ah lahayn iyo did Islaam ah. ...